Arbetsförmedlingen oo 100 xafiis xiraysa | Somaliska
Arbetsförmedlingen oo 100 xafiis xiraysa
Xafiiska shaqada (Arbetsförmedlingen) ayaa ku dhawaaqay in ay isbedalo waaweyn ku samayn doonaan qaabka ay u shaqeeyaan taasoo sababtay in ay xirayaan 100 xafiis oo ku yaala daafaha Sweden. Arbetsförmedlingen oo ka mid ah hay’adaha ugu magaca liita wadanka ayaa doonaysa in ay si weyn wax uga badalaan shaqadooda.
Agaasimaha Arbetsförmedlingen oo lagu magacaabo Mikael Sjöberg ayaa sheegay in sababta loo xirayo xafiisyada ay tahay in waqti fiican ay helaan shaqaalaha, waxa uu sheegay in aan shaqaalaha la cayrin doonin balse xitaa ay qoran doonaan shaqaale cusub. Ujeedada ayaa ah in la kordhiyo adeegyada internetka ee oo hawsha inteeda badan online lagu qabto. Arbetsförmedlingen ayaa hada daafaha Sweden ku leh 320 xafiis.
Agaasimaha ayaa sheegay in ay hadaba bilaabeen in ay fasaxaan xafiisyada la xiri doono. Dowlada cusub ayaa Arbetsförmedlingen u balan qaaday lacago cusub isla markaana u dhiibtay hawl cusub oo loogu magacday 90-dagarsgaranti, taasoo ah in dhalinyarado muddo 90 maalmood ah shaqo ama waxbarasho la geeyo.
Sidoo kale Arbetsförmedlingen ayaa sii wadi doona shaqada qaabilaada dadka cusub iyo sidii ay wadanka ula qabsan lahaayeen balse dowlada cusub ayaa ku dhawaaqday in la joojin doono shirkadaha Etableringslots ee la shaqeeya Arbetsförmedlingen ka bilaabata 1 janaayo 2016.
Waa Arin wanagsan
fartuun cali says:
November 16, 2014 at 22:03
waxaan rabnaa in shaqo nalasiiyosi aan nole sheena umaareeyno maxaa yeeley marabno inaanguryaha iska joognowaxqabad la aan dan nooguma jirto ceeyrta aan qaadano